UMongameli ongalindelekanga kaGerald R. Ford
Ukuba ngumongameli wongameli okanye uMongameli wase-United States akukho nto encinane. Kodwa phakathi kowe-1973 no-1977, uGerald R. Ford wenza konke-ngaphandle kokuvota elinye. Wenza njani loo nto?
Ekuqaleni kweminyaka yama-1950, xa iinkokeli zaseMican Republic Party zambongoza ukuba agijime kwi- Senate yase - US- ngokuqhelekileyo ibhekwa isinyathelo esilandelayo ukuya kumongameli-Ford wehla, echaza ukuba isifiso sakhe siza kuba nguSomlomo weNdlu , isikhundla esithi " mpu melelo "ngelo xesha.
"Ukuhlala apho kwaye ube yintloko yentloko yabantu abangama-434 kwaye unembopheleleko, ngaphandle kwempumelelo, yokuzama ukuqhuba umbutho omkhulu kunomthetho kwimbali yoluntu," kutsho iFeod, "ndicinga ukuba ndinalo mbono ngaphakathi unyaka okanye ezimbini emva kokuba ndiseNdlu yabameli. "
Kodwa emva kweminyaka engaphezu kwelishumi yokubeka imizamo yakhe engcono, iFort yaqhubeka ihlulekile ukukhethwa njengesithethi. Ekugqibeleni, wathembisa umfazi wakhe uBetty ukuba ukuba uthetha ukhulume kwakhona ngo-1974, wayeya kuhlala kwiCongress kunye nobomi bezopolitiko ngo-1976.
Kodwa kude "nokubuyela epulazini," uGerald Ford wayeza kuba ngumntu wokuqala ukuba abe nguThini uMongameli kunye noMongameli we-United States ngaphandle kokunyulwa ukuba abe yiofisi.
Ngokukhawuleza, 'nguMongameli uMongameli Ford'
Ngo-Oktobha 1973, uMongameli uRichard M. Nixon wayekhonze isigxina sesibini kwiNdlu ye-White House xa i-Vice-President wakhe uSpiro Agnew esula phantsi phambi kokuncenga inxaxheba kumatyala aseburhulumenteni ekukhuselweni kweerhafu kunye nokuthunyelwa kwemali ehambelana nokuwamkela i-$ 29,500 ngeenkohlakalo xa igosa lika-Maryland. .
Kwisicelo sokuqala senkxaso-mali ka-Vice-Presidential provision of the 25th Amendment kuMgaqo -siseko wase-US, uMongameli uNixon otyunjwe nguMphathiswa weZindlu eziNcinci iGeorge Ford ukuba athathe indawo ye-Agnew.
Ngomhla kaNovemba 27, i-Senate yavota 92 ukuya ku-3 ukuqinisekisa iFoeff, kwaye ngoDisemba 6, 1973, iNdlu yaqinisekisa iPoronto ngokuvota kwama-387 ukuya kuma-35.
Ngenye iyure emva kokuba iNdlu ivotelwe, iF Ford yafungiswa njengeNkongameli we-United States.
Xa avumile ukwamukela ukhetho lukaMongameli uNikexon, uF Ford watshela uBetty ukuba iVice-Presidency yayiba "isiphumo esihle" kwipolitiki yakhe. Abazange bazi, kodwa ukuba umsebenzi wezopolitiko waseGeorge wawunanto.
UMongameli ongalindelekanga kaGerald Ford
Njengoko uGerald Ford wayesebenzisa isicinga sokuba ngumongameli wongameli, isizwe esiphezulu sasibukele ukuhlaselwa kwe- Watergate .
Ngethuba lokwaphulo-mthetho luka-1972, amadoda angamahlanu aqeshwe yiKomiti kaMongameli weNikonko ukuba aphinde akhethe uMongameli wayenqatshelwe kwikomkhulu leDemocratic National Committee ehhotela laseWashington DC e-Watergate, ezama ukutshitshisa ulwazi olunxulumene nomdlali weNixon, uGeorge McGovern.
Ngomhla ka-Agasti 1, 1974, emva kweeveki zamangqina kunye nokuphika, uMongameli weSihlalo weNgqungquthela ka-Alexander Haig watyelela iVice-President Ford ukuba amxelele ukuba ubungqina bokuthi "ukubhema" ubungqina beNtexon yamacandelo e-Watergate ayimfihlo. UHaig watshela iFood ukuba iingxoxo kumateyibhile zashiya ngokungathandabuzeki ukuba uMongameli uNixon uthathe inxaxheba, ukuba akayilelwe, i-cover-up ye-Watergate break-in.
Ngethuba lohambo lukaHaig, uFort kunye nomkakhe uBetty basaphila kwikhaya labo laseVirginia ekhaya ngelixa i-vice-president yokuhlala eWashington, DC yahlaziywa. Kwiimemori zakhe, uGord uya kuthi emva kwaloo mini, "U-Al Haig wabuza ukuba eze kwaye ndibone, ukuba undixelele ukuba kuya kubakho i-tape entsha ekhutshwe ngoMvulo, kwaye uthe ubungqina obukho bubuhlungu kwaye mhlawumbi nokuba ngumphambuko okanye ukuyeka emsebenzini. Wathi ke, "Ndiyilumkisa ukuba kufuneka ulungele, ukuba ezi zinto zingatshintsha ngokuphawulekayo kwaye unokuba ngumongameli." Kwaye ndathi, 'UBetty, andicinga ukuba siya kuhlala kwikhaya likamongameli.'
Ngenxa yokuphambuka kwakhe ngokuthe ngqo, uMongameli uNixon wasula u-Agasti 9, 1974. Ngokweenkqubo zokulandelana kukaMongameli , uMongameli uGerald R.
I-Ford yafunga ngokukhawuleza njengoMongameli we-38 we-United States.
Inkulumo evuliwe, ephathekayo kazwelonke evela kwi-East Room ye-White House, iFord yathi, "Ndiyazi kakuhle ukuba awungandulile njengomongameli wakho ngevoti zakho, ngoko ke ndikucela ukuba undiqinisele njengomongameli wakho kunye thandazo. "
UMongameli Ford wongezelela ukuba, "Abazalwana bam baseMerika, ubuhlungu bethu belizwe bude buphelile. UMgaqo-siseko wethu usebenza, iRiphabliki yethu enkulu nguRhulumente weemithetho kwaye kungekhona abantu. naluphi na igama elimzukisayo, ongenamisela nje ubulungisa kuphela kodwa uthando, kungekhona nje ubulungisa kodwa inceba. Masibuyise umgaqo wegolide kwiinkqubo zethu zezopolitiko, kwaye uthando lomzalwana luye luhlanjululwe iintliziyo zethu.
Xa uthuli lulungiselele, ukubikezela kukaFeet kuBetty kwazaliseka. Esi sibini sathuthela kwiNdlu eNtshonalanga ngaphandle kokuhlala endlwini yomphathi wongameli.
Njengomnye wezenzo zakhe zokuqala ezisemthethweni, uMongameli Ford wasebenzisa iSigaba 2 se-Amendment sama-25 kwaye wakhethwa uNelson A. Rockefeller waseNew York ukuba abe ngumongameli wongameli. Ngo-Agasti 20, 1974, zombini iiNdlu zeCongress zavota ukuqinisekisa ukutyunjwa kwaye uMnu. Rockefeller wathatha isifungo se-ofisi kaDisemba 19, 1974.
IFort Pardons Nixon
NgoSeptemba 8, 1974, uMongameli Ford wanikela uMongameli wangaphambili uNixon ukuxolela umongameli opheleleyo kunye ongekho phantsi kokungamvumeli naluphi na ulwaphulo-mthetho olwenziwe ngokumelene ne-United States ngelixa ngumongameli. Kwi-TV yokuhanjiswa kweTV, uF Ford wachaza izizathu zakhe zokunikezela ukuxolela, wathi imeko ye-Watergate ibe "yintlekele apho sonke senze indima.
Iyakwazi ukuqhubeka kunye nokuqhubekeka, okanye umntu kufuneka abhale ukuphela kwayo. Ndagqiba ekubeni ndiyakwenza oko kuphela, kwaye ukuba ndiyakwazi, ndimele. "
Malunga nesiHlomelo sama-25
Ukuba kwenzeke ngaphambi kokuba kulungiswe iSilungiso sama-25 ngoFebruwari 10, 1967, ukutyunjwa kwe-Vice-President we-Agnew kwaye ngoko uMongameli uNixon wayeya kuba yinto ebangela ukuba kubekho ingxaki ebalulekileyo yomgaqo-siseko.
Uhlengahlengiso lwesi-25 lugqithise igama leSiqendu II, Icandelo 1, iSigatshana 6 somGaqo-siseko, esingakhange sichaze ngokucacileyo ukuba umongameli wongameli uba ngumongameli xa umongameli efa, eyeka, okanye engafanelekanga kwaye akakwazi ukwenza imisebenzi yeofisi . Kwakhona kwacacisa indlela ekhoyo kunye nomyalelo wokulandelana kukaMongameli.
Ngaphambi kokuhlengahlengiswa kwe-25, bekukho iziganeko xa umongameli engakwazi. Ngokomzekelo, xa uMongameli uTolrow Wilson ehlaselwa yintlungu ephazamisayo ngo-Oktobha 2, ngo-1919, akazange atshintshwe esikhundleni sakhe, njengoMongameli wokuqala uWilliam Wilson, kunye noMnquli weNdlu ye-White House, uCary T. Grayson, wavala ubungakanani bokukhubazeka kukaMongameli Wilson. . Kwiinyanga ezili-17 ezilandelayo, u-Edith Wilson ngokwenene wenza imisebenzi eminingi kamongameli .
Ngezihlandlo ezili-16, olo hlanga lwalukho ngaphandle kwe-vice-president ngenxa yokuba i-vice-president yayifile okanye yaba ngumongameli ngokulandelana. Ngokomzekelo, kwakungekho mphini kamongameli malunga neminyaka emine emva kokubulawa kuka- Abraham Lincoln .
Ukubulawa kukaMongameli uJohn F. Kennedy ngoNovemba 22, 1963, kwabangela ukuba iNkongele iqhubezele ukulungiswa komgaqo-siseko .
Ekuqaleni, iingxelo eziphosakeleyo zokuthi i-Vice-President uLyndon Johnson nayo yadutshulwa yakha iiyure eziliqela ezithintekayo kwi-federal government.
Ukutshatyalaliswa kungekudala emva koCrisis of Missile Crisis kunye neNtsholongwane yeNtsholongwane eqhubekayo kwi-fever pitch, ukubulawa kukaKennedy kwanyanzelisa iCongress ukuba ifike ngeendlela ezithile zokumisela ukulandelana koongameli.
UMongameli omtsha uJohnson wafumana imiba emininzi yempilo, kwaye amagosa amabini alandelayo ngokumalunga nomongameli wayeneminyaka engama-71 uSomlomo weNdlu uJohn Cormack kunye noMongameli we-Senate weSenate, uPratre Carl Hayden oneminyaka engu-86 ubudala.
Kwiinyanga ezintathu zokufa kukaKennedy, iNdlu kunye neSeti yadlulisela isisombululo esisisombululo esiza kufakwa kwilizwe njengesiHlomelo sesi-25. Ngomhla ka-Februwari 10, 1967, iNigeria ne-Nebrask yaba ngowama-37 no-38 ukuvuma ukulungiswa, okwenza kube ngumthetho welizwe.
IShedyuli yokuSebenza eyiNgcono yeSkredater Skater kuQeqesho?
Sawubona iCheers for Cheerleaders
Ukufunyanwa kweTomb King
UMthetho woKutya koMoya
Uphi Ubomi Bokufa kwiCricket?
Ubunqunu kunye neNkonyane
Indlela Yokukhulisa Amakristali - Iingcebiso Nezobugcisa
Eyona Mveli yaseMelika yaseMandulo